Braus na-agba ume ọla kọpa, ọla kọpa, nchara ígwè
Home / ngwa / Brazing imebi / Ntughari Brazing
Category: Brazing imebi Tags: brazing maka ijikọ usoro, ịmalite ime ihe, usoro nkwado, usoro nkwado iji wụnye ọkụ, ume nkwado, Ngwunye Brazing Machine, Ngwunye brazing igwe emeputa, ntinye kpo oku maka bra bra
Kedu ihe nkwado brazing?
Brazing imebi bụ usoro ihe jikọrọ ihe nke na-eji ígwè na-egbuke egbuke (ma na-abụkarị ihe mgbazinye ọgwụ na-eme ka a na-akpọ flux) iji jikọta ọla abụọ na-ejikọta ọnụ na-enweghị agbaze ihe ndị bụ isi. Kama nke ahụ, okpukpu ọkụ na-agbaze ihe na-egbuke egbuke, bụ nke a na-adọta n'ime ihe ndị dị na ya site na arụmụma capillary.
Nkwụsị aka nwere ike ịbanye n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ọla, ọbụlagodi ndị na-adịghị ike. Obi ike na-egosi na ọ bụ ihe ziri ezi na ngwa ngwa. Naanị ebe akọwapụtara ebe dị ọkụ, na-ahapụ ebe dị n'akụkụ na ihe ndị a na-adịghị ahụkebe. Ihe nkwonkwo a kwadoro nke ọma bụ ihe siri ike, nkwenye na-adịghị mma na nkwụsị. Ha dịkwa ezigbo mma, na-achọkarị ka egwe ọka, igwu ma ọ bụ mechaa. Ntughari nkwado bụ ihe dị mma maka ijikọta n'ime ntinye mmepụta.
DaWei Induction brazing usoro enwere ike iji ya rụọ ọrụ ọ bụla. Ruo ugbu a, a na-ejikarị usoro anyị eji eme ihe na ụlọ ọrụ electrotechnique iji kpochapụ ihe ndị na-emepụta ihe na transfomer dị ka ihe ntụchi, eriri, yiri mgbaaka, wires na SC-yiri mgbaaka. Ha na-akụkwa mmanụ ụgbọ ala na AC ma mebie akụkụ maka ụlọ ọrụ na-arụkwa ụgbọala. Ụlọ ọrụ ndị na-eme njem ụgbọelu na-eji eme ihe iji mee ka ihe ọkụkụ na-acha ọkụ, eriri maka akpa, na mmanụ ụgbọala na hydraulic. N'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, usoro anyị na-agbanye ihe ngwugwu, ihe ọkụkụ na ihe mgbakwasị ụkwụ. Kedu ihe ọrụ dị? Anyị Ntughari ihe nkwado brause na-agụnyekarị DaWei Handheld Induction heating system.
Mgbapu Nchara Igwe Ala Na-agba Ọkụ